तपाईँ पङ्क्तिहरू वा स्तम्भहरू तालिकामा थप गर्न वा मेट्न सक्नुहुन्छ साथसाथै कुञ्जीपाटी प्रयोग गरि तालिका कक्षहरू बिभाजन गर्नुहोस् वा गाभ्नुहोस्.
तालिकामा नयाँ पङ्क्ति घुसाउनका लागि, कर्सर तालिका कक्षमा राख्नुहोस्, विकल्प Alt+Ins थिच्नुहोस् , र माथि वा तल बाँण कुञ्जी थिच्नुहोस्. तपाईँ तालिकाको अन्तिम कक्षमा कर्सर लैजान पनि सक्नुहुन्छ, र Tab थिच्नुहोस्.
नयाँ स्तम्भ घुसाउनका लागि, तालिका कक्षमा कर्सर राख्नुहोस्, विकल्प Alt+Ins थिच्नुहोस्, र बायाँ वा दायाँ बाँण कुञ्जी थिच्नुहोस्.
स्तम्भ थप गर्नुको सट्टा तालिका स्प्लिट गर्नका लागि, विकल्प Alt+Ins थिच्नुहोस्, र तपाईँले बायाँ वा दायाँ बाँण कुञ्जी प्रे गरेको बेलाआदेश Ctrlथिच्नुहोस्.
पङ्क्ति मेटाउनका लागि, तालिका कक्षमा कर्सर राख्नुहोस्, विकल्प Alt+Del थिच्नुहोस् , र माथि वा तल बाँण कुञ्जी थिच्नुहोस्.
स्तम्भ मेटाउनका लागि, तालिका कक्षमा कर्सर राख्नुहोस्, विकल्प Alt+Del थिच्नुहोस् , र बायाँ वा दायाँ बाँण कुञ्जी थिच्नुहोस्.
संलग्न कक्षमा तालिका मर्ज गर्नका लागि, कक्षमा कर्सर राख्नुहोस्, विकल्प Alt+Del थिच्नुहोस् , आदेश Ctrlसमाउनुहोस्, र बायाँ वा दायाँ बाँण कुञ्जी थिच्नुहोस्.
Title is: कुञ्जीपाटी प्रयोग गरि तालिकामा पङ्क्ति वा स्तम्भ थप गर्दा वा मेट्दा